Shily: “Aza matahotra aterineto,” ny raharahan’ny Ciudadano Inteligente · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Avrily 2019 4:01 GMT
Arovan'ny fizakamanana ny fampahalalam-baovaom-bahoaka ao Shily. Manamarika ny zava-misy marina roa fototra izany farafahakeliny: voalohany, misy ny sakana lehibe amin'ny fidirana amin'ny angondrakitra vokarin'ny fanjakana; ary faharoa, kely ny azonao atao na tsy misy mihitsy aza amin'io angondrakitra io, noho ny famerana efa fanta-daza momba ny “all rights reserved” (mila fahazoan-dàlana). Mampametra-panontaniana amin'ny natiora ankapoben'ny angondrakitra izany.
Tsy mety mihitsy ireo zon'ny fizakamanana ara-tsaina miaro ny fampahalalam-baovaom-panjakana ireo satria tsy vitan'ny tsy mahazo vaovao amin'ny fampahalalam-baovaom-bahoaka fotsiny ihany ny olom-pirenena, fa satria koa izany misakana ny hetsika mifandraika amin'ny fangaraharana sy ny fanaraha-maso ny asan'ny orinasam-panjakana amin'ny sehatra nomerika .
Miharihary tao amin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ny orina mpanasoa Ciudadano Inteligente [Olom-pirenena Mahiratra] ny tranga iray niavaka izay nampiseho ny olana farany. Niaraka tamin'ny fanorenan'asa izay mandrisika ny fangaraharana amin'ny sampandraharaham-panjakana any Shily dia miatrika hatrany ny safidy sarotra manoloana ny hoe inona ny zo manan-danja kokoa mihoatra ny hafa ny Ciudadano Inteligente : ny zon'ny fizakamanana ara-tsaina momba ny angondrakitra an'ny fanjakana ve sa ny zon'ny olom-pirenena hiditra amin'ny fampahalalam-baovao ho an'ny daholobe. Araka ny hitanao amin'ny lahatsary eto ambany, mazava sy mampahery ny valiny ho an'ny Ciudadano Inteligente : #NoTemasaInternet (Aza matahotra Aterineto).